Sonke SiMthiyile ugaxekile kunye nokufowunelwa okubandayo ... Kude kube asiyi | Martech Zone
Sonke SiMthiyile ugaxekile kunye nokuFowunelana ngokuBandayo… De Kude kube njalo
NgoLwesine, uJuni 15, 2017 NgoLwesihlanu, ngoJuni 16, 2017 Douglas Karr
Ngomhla we-15 kaMeyi, ndafumana i-imeyile engacelwanga (aka SPAM) evela kwiarhente eAtlanta indixelela ukuba yintoni ividiyo ecacisayo. Ndiyazi ukuba yintoni, siye Kubhaliwe malunga neevidiyo ezichazayo ngokubanzi kwaye yapapasha uninzi lwethu. Khange ndiphendule kwi-imeyile. Kwiveki kamva, ndifumana enye i-imeyile ngenqaku elifanayo. Emva kweveki, enye. Andiphenduli nakuyo. Ii-imeyile ezine ezingakhange ndiziphendule okanye ndicofe ikhonkco kuzo.
Siqale ukusebenza nomthengi omtsha kwaye someleza iimfuno zabo zokufaka uphawu kwisibambiso esiyila ngokutsha. Enye yeeprojekthi zexesha elizayo esaziyo ukuba siza kujongana nayo kukuchaza ividiyo yabo. Ke, njengoko ndiphendula ingxelo ethile kwisibambiso esitsha esiyenzileyo, ndifumana enye i-imeyile evela kwinkampani yevidiyo echazayo.
Kwakungekho makhonkco akubhalisi kwi-imeyile, kwaye kwakungekho namnye kuwo kuxhaswa yi iilogo ... kodwa ndiqinisekile ukuba usebenzisa isixhobo sentengiso esizisebenzelayo. Ummeli wentengiso ufake amanye amakhonkco omsebenzi wabo wamva kwi-imeyile kwaye bathi banqwenela ukunikezela ngesaphulelo sokusebenza nam kwiprojekthi yokuqala. Ndiphakamisa umnwe wam kwikhonkco lomzekelo imizuzwana embalwa ndizibuza ukuba ingaba izakulunga okanye hayi… ndaza ndacofa.
Indawo endikhe ndacofa kuyo yayiyividiyo emnandi yokucacisa umzuzu-1. Yayinoopopayi ngokupheleleyo, yayinesandi esimnandi, kunye neziphumo zesandi zixubene. Isantya sayo sasingangxanyiswanga kwaphela kwaye yayingumgangatho obalaseleyo. Oku kunokuba sisivumelwano ekungafanelekanga ukuba ndidlule kuso ke ndiphendule ngolwazi lwam lweprojekthi entsha kwaye ndacofa u-send.
Kungaphelanga nomzuzu, yakhala umnxeba wam kwaye yayingumfana owayendithumelela umyalezo ongacelwanga veki nganye. Wafowunela nje ukufumana ezinye iinkcukacha kwaye wayenemincili ukubona ukuba banganceda na. Wayenganyanzelisi, engazami ukundivala, kwaye wachitha ixesha elithile efunda ngeshishini lam nangokubanakho kwethu. Sigqibe incoko naye ethembisa ukulandela umkhondo ngentseni.
Siyayicaphukela… Kodwa iyasebenza!
Ndiqinisekile ukuba ndiza kubethwa kwi-Intanethi ngokuba ngumthengisi we-imeyile evuma esidlangalaleni:
Ngokwenyani ukwenza engacingekiyo kwaye ukucofa ikhonkco kwi-imeyile ye-SPAM.
Kulungile, undifumene. Kodwa uyazi ntoni? Le arhente inokuba ifumene umthengi omtsha oza kubanika umsebenzi oqhubekayo kule nkundla. Kwaye ndinokuba ndibeke iqabane elingakholelekiyo elinokusilinganisela oopopayi ngexabiso elifanelekileyo. Ukuba ndigqiba ukwenza iividiyo ezimbalwa zokucacisa kubo, umvuzo wawungaphezulu kakhulu komngcipheko wazo zombini iinkampani.
Sonke siyakhala size sikhale malunga ne-SPAM kunye neefowuni ezibandayo… kodwa kufuneka sinyaniseke ngokusebenza kwazo. Ukuthengisa konke malunga nemveliso, ukubekwa, kunye nexabiso. Kule meko, imveliso yile nto bendiyifuna, ukubekwa kwayo kubekelwe ixesha ngokuchanekileyo, kwaye ixabiso belilungile.
Oku akuthethi ukuba ndiza kukhuthaza abathengi bam ukuba baqale UKUGQITHA abantu… kodwa ndiyaqonda ukuba kutheni amashishini esenza njalo.
tags: emailiifowuni zentengisoii-imeyile zokuthengisaispemuengacelwangaiintengiso ezingacelwangaimeyile yokuthengisa engacelwanga
Ukuqonda iimfuno zabaThengi bakho ngoVavanyo lwePredictive
Juni 16, 2017 ngo-11: 11 AM
Ndiyavumelana nawe. Into ephambili apha kukuba uphando lubalulekile. Kuya kufuneka sikhuthale ekwenzeni olo phando kwaye siqonde abathengi bethu abanokubakho. Ndicinga ukuba amaxesha ngamaxesha sifumana i-grumpy encinci kuba sinokuba namava okuphawulwa nge-SPAM kwaye sifumana into encinci eyonwabisayo ukumakisha abanye njenge-SPAM. Olu hlobo lwezinto lunokonakalisa amashishini; ixesha elide. Ndifumene i-imeyile ebandayo phezolo kumntu owayezama ukundithengisa ngeenkonzo zomxholo, ekuqaleni bendizokumakisha njengogaxekile, kodwa andizukuyenza. Wayengenalo ikhonkco elingabhaliswanga, nokuba. Ndikhombe nje loo nto ndathi, "hayi, enkosi." Ndicinga ukuba kufuneka siqonde umahluko phakathi kogaxekile. Abo bathi, "thatha esi songezelelo sitsha," okanye "wenze i-1,000, XNUMX leedola ngemini, ekhaya"; Ngokucacileyo ezi zigaxekile, akukho kujoliswe kuko. Ndicinga ukuba umthengisi enze uphando olwaneleyo lokwazi ukuba ukuthengisa kwaye ukuhambisa i-imeyile enikezela ngenkonzo yokuthengisa, kulungile. Thetha ngokungagungqiyo kwaye uthi, "hayi, enkosi" kwaye iyakwenza. I-imeyile ayihambi, okanye ukubiza ukubanda.